Ngikholwa ukuthi wonke umuntu angakubona ukuphepha nokusebenza kwezempilo kwe-sterilization retort, ngoba empeleni konke ukudla okulondoloziwe kufanele kudlule kwinqubo enjalo yokuvala inzalo, ukuze kuqinisekiswe impilo yokudla. Okuhlangenwe nakho kwezokuphepha ukuthi imishini kufanele yakhelwe ngamaphayiphu okuphepha, izikali zokucindezela kanye nama-thermometer ukuqinisekisa ukuphepha, ukuphelela, ukuzwela nokuthembeka kwemishini. Ngenkathi yokusetshenziswa kufanele kukhulise ukugcinwa kanye nokulinganisa okujwayelekile. Ingcindezi yokuqala ye-valve yokuphepha ilingana nengcindezi yokuklama futhi kufanele izwele futhi ithembeke. Ukuze kuqinisekiswe lezi zici ezingenhla, indlela yokusebenza yokubuyisa inzalo idinga ukwenziwa ngale ndlela.
1. Ukulungiswa ngokungenasizathu kufanele kuvinjelwe. Ama-gauges nama-thermometer asesigabeni sokunemba esingu-1.5 futhi umehluko ngaphakathi kwebanga lephutha ujwayelekile.
2. Ngaphambi kokufaka i-retort isikhathi ngasinye, opharetha kufanele ahlole ukuthi ngabe bakhona yini abasebenzi noma amanye amasundundundundundu, bese ephusha umkhiqizo ku-retort ngemuva kokuqinisekisa ukuthi ulungile.
3. Ngaphambi kokuba umkhiqizo ngamunye ufakwe embundwini, hlola ukuthi indandatho yokubekwa uphawu komnyango we-retort ilimele noma ayikho emgodini, bese uvala futhi ukhiye umnyango wokubuyisa ngemuva kokukuqinisekisa.
4. Ngesikhathi sokusebenza kwemishini, opharetha kufanele aqaphe isimo sokusebenza kwegeji yokucindezela, igeji yezinga lamanzi kanye ne-valve yokuphepha esizeni, futhi abhekane nanoma yiziphi izinkinga ngesikhathi.
5. Ungawuphushi umkhiqizo ungene ngaphakathi noma ngaphandle kwe-retort ukuvimbela ukonakala kwepayipi kanye nenzwa yokushisa.
6. Uma kwenzeka i-alamu ngenkathi kusebenza okokusebenza, opharetha kufanele asheshe athole isizathu. Futhi uthathe izinyathelo ezihambisanayo.
7. Lapho opharetha ezwa ukuphela komsebenzi futhi ethumela i-alamu, kufanele avale inkinobho yokulawula ngesikhathi, avule i-valve yokukhipha, abheke inkomba yegeji yengcindezi negeji yezinga lamanzi, futhi aqinisekise ukuthi izinga lamanzi kanye nengcindezi kubhayela akubanga zero. Bese uvula umnyango wokubuyisa.
8. Akuvunyelwe nhlobo ukusebenzisa umshini onesifo. Uma kunenkinga, kufanele wazise abasebenzi bokugcinwa kwemishini ngesikhathi. Akuvunyelwe neze ukuqaqa nokugcina umshini ngaphandle kokugunyazwa.
9. Lapho uhlanza futhi uhlikihla okokusebenza, isikrini sokubonisa esisebenzayo kufanele sivikelwe ukuqinisekisa ukuthi isibuko sokubonisa somile futhi asinamanzi.